Icandelo le-geospatial: Iziphumo zovavanyo lwengqesho-Geofumadas
Icandelo le-geospatial: Iziphumo zovavanyo lomsebenzi
Icandelo le-geospatial: Iingxelo zengqesho yophando
Matshi, 2012 Geospatial - GIS
Uqeqesho lwe-Geospatial Español sele isasazisile iziphumo uhlolo abalwenzileyo Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, apho uhlalutyo lwecandelo lwenziwe ngeziphumo ezinomdla.
Ngokommiselo, siyavuyisana ne-Directions Magazine imizamo eye yongezwa kwicandelo le-Hispanic kangangexesha elithile, eyandisa uluhlu lweenkonzo abazinikezelayo kwaye yongeza kuzinzo kwicandelo le-geospatial.
Ukuphononongwa kweziphumo, sinokubona ngokucacileyo imiba evunyiweyo kodwa kodwa ukusetyenziswa kwesixhobo esisesikweni kuphela sinokuqinisekisa ngobungqina obusisiseko solwazi. Nangona sikholelwa ekubeni isampulu ilahlekelwa kukumelwa kwayo kwinqanaba elithile kuba ayifikanga kwinqanaba eliphezulu lokuphazamiseka.
Malunga ne Wages
Ngelixa kwindawo yase-Hispanic baphakathi kwe-25,000 kunye ne-30,000 Euro, e-United States ikwi-55,000 Euros phakathi kwabaphenduli abaphendule kweli lizwe. Kucacile ukuba kukho ukungcola okuncinci okuvame ukuvuza xa ubuza lo mbuzo ngaphandle kwengcaciso eyaneleyo, kuba kumazwe ase-Latin Melika ikota yengeniso ayifane isetyenziswe, abantu ngokubanzi bayandisela umvuzo wabo wenyanga nge-12 okanye i-13 iinyanga, engazi Kuyinyani xa kuthelekiswa ne-United States. Umahluko ukho kwizibonelelo zentlalo zexesha eliphakathi nelide, e-United States azifumaneki zinjalo kwaye zibandakanywa kwingeniso yonyaka, ngelixa kuthi zona zingamalungelo aqokelelene nokuthi ngendlela nobuthathaka kumcimbi wentlalontle okanye Ubuninzi bomthetho siphantse sabapha ngokungathi abukho. Ukuba siyazibandakanya siya kunika ingxelo yengeniso yonyaka ephezulu. Izibonelelo zentlalontle zahluka kakhulu phakathi kwamazwe anje ngeSpain, iChile neMexico, kwaye akukho lula kangako ukuchaza ingeniso yonyaka ngaphandle kokwenza ezo zinto ziqwalaselwayo kuba ngelixa kwamanye amazwe irhafu ibanjiwe kwirhafu, kwamanye inyathelo elihlayo kwaye Ukuboleka okuninzi ekubalekeni.
Uphononongo olusetyenziswe kwicandelo le-Anglo-Saxon libonisa ukuba umndilili ungaphakathi kwiidola ze-55,000 (iliso, oku kungaphantsi kwe-43,000 Euro) kwaye kukho ulwaziso olubalulekileyo phakathi kwe-30,000 Euro kunye nee-62,000 Euro.
Lo mahluko usisiqhelo ungaphaya kokucaca ngenxa yokungalingani okwenziwa lilizwe lonke. Umsebenzi okhawulezayo wokutya eUnited States ufumana umvuzo ofanayo okanye ongaphezulu kunowomyili wamahlathi / namahlathi kwiLatin America. Okugqithisileyo ngakumbi kwimeko yemason yokwakha apho umsebenzi uhlawulwa ngakumbi kumazwe athuthukileyo.
Ngenxa yoku, Uqeqesho lweGeospatial ndicinga ukuba uya kukwazi ukusebenzisa amaxabiso kwizifundo zakho ngexabiso elahlukileyo lemeko ye-Hispanic. Yintoni esiyibonayo ngamehlo amahle kwaye siyakholelwa ukuba ingasetyenziswa kwintengiso yeenkonzo, nangona ngelishwa akunakwenzeka ukuba oku kusebenza kwezinye izinto ezinjenge software kunye nezixhobo.
Malunga neSoftware kunye neenkqubo zokusetyenziswa kweelwimi
Ndivumelana nokucinga kwabaninzi ukuba ubuvuvu isiphumo esingenakugwenywa sokungalingani kwezentlalo phakathi kwamazwe aphuhlileyo nelinye ilizwe; Kodwa ndiyakholelwa nokuba ipesenti ephezulu yokuqhwesha kungenxa yesimo sobuchule sokungatyali isoftware enexabiso eliphantsi (elifikelelekayo) kunye nomzamo omncinci wokuphanda okanye ufunde ezinye iindlela zokusombulula iingxaki (ezinje ngesoftware yasimahla. ).
Kucacile ukuba kwimakethi yase-Hispanic, isoftware yasimahla inomgangatho owamkelekileyo wokwamkelwa kunye nokwabiwa. Jonga ukuba kwimeko ye-Anglo-Saxon ukusasazwa kwesoftware esetyenzisiweyo yile:
Umthombo ovulekileyo 10%
I-Bentley + Mapinfo + I-Xgraph ye9%
Kwimithombo yeendaba ye-Hispanic, jonga indlela uMthombo oVulekileyo uphumelele i-25% kwi-Esri ikakhulu, kuba ezinye iinkqubo zibandakanyiwe ngokubhekisele kwi-Esri
Umthombo ovulekileyo 25%
I-Bentley + Mapinfo + I-Xgraph ye15%
Ngokuqinisekileyo oku kuhanjiswa kwahluke kakhulu kwimeko yeSoftware yeBunjineli apho uMthombo oVulekileyo unexabiso elincinci kunangoku.
Kulungele ukufunda iziphumo zovavanyo ngenxa yokuba zikhona ezinye izigqibo ezibalulekileyo ezinokuthi zisetyenziswe ngumntu wonke.
Jonga iziphumo zespanish Apha
Jonga iziphumo zovavanyo ngesiNgesi Apha
Jonga uhlalutyo olwenziwe nguEsospoal Training Español Apha
Post edlulileyo«Edlulileyo Ulwimi lwaseSpain, usuku lokuhamba ngeZ! Izikhala
Post Next Amacwecwe, i-steroids yeBentley DescartesOkulandelayo "